Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Riu Hotels hitazomana ny morontsiraka Matapalo any Costa Rica ho azo antoka sy hadio kokoa
Ny RIU Hotels dia manohy miasa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanatsarana sy fikojakojana tsara ireo toerana itodihany.
RIU Hotels dia manohy miasa amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanatsarana sy fikojakojana tsara ireo toerana itodihany. Amin'ity fotoana ity dia niara-niasa tamin'ny manampahefana tao Carrillo, ao amin'ny faritanin'i Costa Rican, Guanacaste, ny RIU. Mba hiarovana ny morontsirak'i Matapalo, natsangana ny rafitra iray izay manakana ny fandalovan'ny fiara sy ny quad, izay atahorana ho an'ny mpandro sy ny mpitsidika.
Ny iray amin'ireo lahasa lehibe dia ny fanamboarana tetezana hahafahan'ireo fiara tonga any amin'ny faritra fandehanana amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Raha araka izay azo atao dia miasa toy ny rafitry ny tatatra ny tetezana mandritra ny orana. Ho fanampin'izay, ny RIU dia nanome dabilio sy vilany voninkazo lehibe izay sakana hisorohana ny fidirana amin'ny faritry ny daholobe voafetra.
Ny ben'ny tanànan'i Carrillo, Carlos Cantillo, dia nilaza fa "ary koa ny fanaingoana sy fanatsarana ny fidirana amin'ny morontsiraka, ireo asa ireo dia miantoka fiarovana avo kokoa ho an'ireo mpitsidika". Ankoatr'izay dia nanasongadina izy fa "manakana ny fidiran'ny fiara izay mety hiteraka lozam-pifamoivoizana".
Na dia voarara aza ny fidirana amin'ny fiara hafa, dia manome antoka ny fidirana ho an'ny daholobe sy voafehy ho an'ireo izay ao amin'ny sampana vonjy taitra ity tetikasa ity. Ankoatr'izay, ny ski jet na sambo fidirana mankao amin'ny ranomasina dia avela ho amin'ny asa ilaina.
Notokanan'ny RIU ny Riu Guanacaste, trano fandraisam-bahiny voalohany tao Costa Rica tamin'ny taona 2009, narahin'ny Riu Palace Costa Rica tamin'ny taona 2012. Hatramin'ny nanombohan'ny fiasan'ny orinasa dia nifandray be tamin'ny tanjona sy ny fivoarana izy. Ny complexe RIU dia miorina ao Playa Matapalo, faritra iray izay tena tsara tarehy voajanahary. Noho izany dia nanapa-kevitra ny rojom-hotely hanokana efa ho 200 amin'ny 250 hektara ny fananany hitahiry ny tontolo iainana eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fananganana ny RIU Wildlife Refuge. Ity dia faritra iray izay mamorona ampahany amin'ny lalantsara biolojika Chorotega, noho izany ny fitehirizana ny zavamaniry sy ny biby dia ho tombontsoam-pirenena.
UNWTO: Ny fizahantany dia lasa sehatra fanondranana fahatelo lehibe indrindra manerantany